Ubizwe ngesilwane unozinti weSundowns - Ilanga News
Home Ezemidlalo Ubizwe ngesilwane unozinti weSundowns
Usefuna indebe yeMTN8 yelanywe ngeyeCaf Champions League
ISILOMO sikanozinti weMamelodi Sundowns sidalule ukuthi sesilubalubela ukuqukula ihlandla lesibili indebe yeCaf Champions League kule sizini.
Lokhu uDenis Onyango (osesi-thombeni) ukusho emuva kokwenza umsebenzi oncomekayo evi-mba amaphenathi ayisihlanu ezakhe zihlula iCape Town City ngo-3-2 sekukhahlelwa amaphenathi kowamanqamu weMTN8 ngoMgqibelo ebusuku eMoses Mabhida Stadium, eThekwini.
Lokhu kwenze ukuthi uRhulani Mokwena ongomunye wabaqeqeshi beDowns, amncome u-Onyango ngokudlala kahle, waze wamfanisa nesilwane okungadlalelwa kusona.
Lo mdlalo ubuphele kungu-1-1 esikhathini esejwayelekile nakwiextra time.
Igoli leSundowns lishaywe ngu-Thapelo Morena ngomzuzu ka-24, eleCity leza noFagrie Lakay ngo-ka-75.
Kulo mdlalo kuqopheke umlando omusha njengoba bekuqala ngqa ukuthi igama leDowns liqoshwe kule nkomishi selokhu lo mqhudelwano wasekwa ngabakwaMTN ngo-2008.
Umsebenzi omuhle kaOnyango wenze waqokwa njengomdlali ovelele, wahlomula ngo-R8 000 kwathi iDowns yagoduka no-R8 million ngokuba yizingqwele. IDowns yagcina ukunqoba le nkomishi eminyakeni ewu-14 edlule isaxhaswe ngabakwa-SAA.
Ngemuva komdlalo u-Onyango utshele abezindaba ukuthi ubekulambele ngendlela exakile ukunqoba le nkomishi eseyibaphuthe imi-nyaka eminingi, obese kuze kwenza abaningi bathi kumele iyongena olwandle ukukhipha isinyama sokuyishweba ngoba le kilabhu beyizinqoba lezi ezinye ezidlalelwa kwiPremier Soccer League (PSL).
“Njengamanje se-ngomele ukuqukula indebe yeCaf Cha-mpions League okwesibili. Ngizobe ngenze kahle kakhulu kubadlali abadabuka e-Uganda uma leli phupho lingafezeka.
“Ngikholwa wukuthi kusizile nokuthi ngigqoka unombolo 14, ohambisana kahle nesikhathi ebese siphelile selokhu sagcina ukunqoba le ndebe.
“Silwe kakhulu kulo mdlalo, kusifanele okwenzekile. Lo msebenzi bengingeke ngiwenze ngi-ngedwa kepha ngibonga lonke ithimba lonozinti beDowns nomqeqeshi wethu uWendell Robinson ofana nobaba kithina ngoba uyakwazi ukusebenzisana kahle nathi singonozinti,” kusho u-Onyango.
Uthi yize iminyaka yabo noKennedy Mweene isihambile kodwa uRobinson unendlela yokubenza bahlale beqatha. Uthi bobabili kabajimi njalo ukugwema ukuthi imizimba yabo isheshe ukukhathala.
“Ngiziphethe kahle na-ngaphandle kwenkundla. Ngiyayiqaphela into engi-yidlayo. Konke lokhu ku-yangisiza ukubhekana nezimo ezinzima,” kusho u-Onyango.
Uthi ukunqoba le ndebe kusho lukhulu nasemndenini wakhe njengoba nendodana yakhe ibigubha usuku lokuzalwa.
AbeMTN8 izonikela ngo-R460 000 kubantu abahlwe-mpu ngamagoli ashaywe kulo mqhudelwano.
Previous articleEzamaGugu zingaba yibhizinisi elinamathuba
Next articleImeya ibalisa ngemali “eyathenjiswa uMasipala”